Home Wararka Barakacayaashii qowmiyada Cafarta oo dib ugu noqonaya deeganadoodii
Barakacayaashii qowmiyada Cafarta oo dib ugu noqonaya deeganadoodii
Qoysas Soomaali ah oo ka barakacay colaadda u dhaxeysa qowmiyaha Soomaalida & Canfarta ayaa dalbaday in dib loogu celiyo deegaannadooda gaar ahaan Gobolka Siti, Duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah ayaa lasoo dersay sida ay sheegeen.
Waxa ay dhaliileen Dowlad-Deegaanka Soomaalida oo ku wargelisay in ay la noolaadaan Canfarta sheeganeysa dhulkooda, si ay u helaan nabadgalyo ay ku joogaan deegaannadooda balse arrintaas ay diideen sida ay u sheegeen BBC-da.
“Maalintii dhibtu dhacday maalintii ka horreysay ayay Dowladdu nagu dhahday labo middood sameeya, Canfarta raacdaan oo aad la heshiisaan ama idin qaadno oo aad ka baxdaan Magaalada balse waan diidnay go’aankaas” ayuu yiri qof kamid ah deegaanka.
Dhanka Magaalada Garba-ciise waxaa saameeyay colaadda qowmiyaha Soomaalida & Canfarta, Dumar, Carruur & dad da’aad kala duwan ah ayay Canfartu ku dishay Magaaladaas kaddib markii duullaan xooggan ay ka geysatay.
“25 carruur ayaa horteyda lagu dilay, waxaa la iga qaatay carruur oo la igu hor dilay, mas’uuliyiin katirsan maamulka ayaa la socotay, dadkii ka badbaaday waa dhaawac oo waxa ay ku silacsan yihiin goobaha caafimaadka” ayay tiri Haweeney kasoo barakacday Garba-Ciise.
Maleeshiyaadka Canfarta ayaa dagaal xooggan ku qaaday Deegaanno ay ku sugnaayeen Soomaali iyaga oo dhimasho & dhaawac ka dhigay dadka deegaanka, Ciidanka Federaalka Itoobiya ayaa ku guuldareystay in uu wax ka qabato tacadigaas.